Gunyana. 6 zvinyorwa zvitsva zvemhando dzakasiyana | Zvazvino Zvinyorwa
Isu tava mukati September. Pakupedzisira. Chasara ndechekuti nhau dzechill dziuye uye mhepo yematsutso yotanga kuvhuvhuta. Saka pandakamirira, ndinoona mashoma nhau kubuda mwedzi uno. 6 mazita yevadzidzi vakasiyana siyana uye zvavanofarira: mwana, hudiki, nhoroondo, nhoroondo kana nhema.
1 Murume ane Dynamite - Henning Mankell
2 Hondo Yemabhiriji - Antony Beevor
3 Mambokadzi muVienna - Tea Stilton
4 Ini ndinonzi Violeta - Santi Anaya
5 Ndarama yeGungwa - Daniel Wolf
6 Kubhururuka - David Baldacci
Dynamite murume - Henning Mankell
Iyo yekutanga novel yeiye akabudirira uye akamirirwa kwenguva refu munyori weSweden werudzi rwevatema. Iyi yaive nyaya inoshungurudza, ichiri yazvino, nezvevashandi panguva yakaoma.
Icho chiito chinotitora isu kuenda Norrköping, muSweden ye 1911. Muchina wokudhinda unodzokorora kufa ne tsaona inosiririsa yemusikana wechidiki anonzi Oskar johansson inogadzirwa panguva yekuputika kwemugero. Nekudaro, Oskar akapona asi kunyangwe akakuvara zvakaipisisa uye nemhedzisiro huru. Kunyange zvakadaro, akaramba achishanda kusvikira aenda pamudyandigere. Uye akararama kusvika 1969.
Mankell anotaura nyaya iyi yehupenyu hwaOskar kuburikidza nemanzwi akasiyana uye maonero. Mhedzisiro ndeye fresco yakakura yemamiriro ekushanda muhafu yekutanga yezana ramakore rechiXNUMX.
Hondo yemabhiriji - Antony Beevor
Iyo British Beevor, pamwe iyo munyori wenhoroondo wechiuto ane mukurumbira wepanguva ino, anosaina rimwe remazita ake ehondo evanoda rudzi.
Zvekare pahwaro hombe uye chaiyo zvinyorwa, zvakashandiswa pano kekutanga, Beevor anotitora isu kuenda Svondo 1944. Mauto akabatana aipfuura nepakati Holland uye vakanga vachigadzirira kuyambuka Rin kupinda nechisimba Germany. Asi muguta re Arnhem kukunda kweGerman kwazvino kwaiita sekunge kwawedzera kukonana kwenguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa.
Beevor zvinehunyanzvi anorondedzera chokwadi chemazuva iwayo nekutsamira mumadhiari uye zvipupuriro zvemunhu waanovimba naye zvakanyanya zvakaitika of the saleados mukurwa sengano yekutambudzika kwe huwandu hwevanhu kubva Arnhem.
Mambokadzi muVienna - Tea stilton
A pakati Gunyana kunouya chiitiko chitsva munhevedzano ye Tea stilton. Inotungamirwa kune vaverengi kubva 7 makore, akatove akateedzerwa uye ane mbiri seiya yemukoma wake, Geronimo stilton.
Ngatiyeukei kuti Tea Stilton, anogara akatsunga uye asingatyi, ndiye nhume yakakosha ye Maungira aRodent, bepanhau rinotungamirirwa nemukoma wake Geronimo. Uye mune dzino zvakateedzana izvo Tea nyeredzi zvirimo, anotiudza nezvake akawanda mafambiro kupota pasirese nevamwe vana shamwari. Ivo vese vanoumba iyo Tea Kirabhu, iko iyo hushamwari, kunyengera uye kuferefeta kuferefeta havavaregi kuti vamire kwekanguva.
Mune ino kesi tinoenda navo ku Vienna. Ikoko ivo vachatora chikamu mune a pastry makwikwi, ivo vachaenda kubhora mumuzinda uye ivo vanofanirwa kuongorora nekutsvaga a recipe yekubira. Sezvazvinowanzoitika munhevedzano, iyo chinyorwa chinokwezva typographic zvinyorwa uye didactic poindi mumabasa pakupedzisira inozadzisa varaidzo. Ini ndinopupura nemaziso emuzukuru wangu ane makore masere ekuberekwa, anga aine nguva yakanaka chirimo ichi achishanyira London navo.
Zita rangu ndi violet - Santi Anaya
Kupera kwaSeptember Iyi nhoroondo inotsikiswa kune vateereri vadiki kubva pamakore gumi nemana. Icho chiri nyaya yakafemerwa nehupenyu hwemwanasikana wa hunhu hunokakavara uye panguva imwechete hunonakidza sezvinoita mutambi Nacho Vidal. Musoro wekuunza nekuita kuti zvionekwe kuhura kune vechidiki.
Tinoziva Violeta, ndiye musikana mutsva anobva kuchikoro. Hapana munhu ikoko anoziva zvakapfuura uye izvo zvinomukwanira zvakanaka nekuti zvinoreva kuti hapana munhu anoziva izvozvo kusvika ave namakore mashanu ekuberekwa yakanga iri nacho uye munhu wese akamubata sezvaakange asiri: mwana. Zvino zvese zvinobva zvaoma kana achinge asangana naAndrés. Anoda mukomana kekutanga uye iwe unonzwa sekunge iwe unofanirwa kumuudza iye chokwadi. Asi pese paanoedza, haakwanise nekuti anotya kuita kwaAndres.
Ndarama yegungwa - Daniel Wolf
Pakupera futi, Nyamavhuvhu 20, izvi zvinobuda nhoroondo yenhau yakasainwa nemunyori uyu yaifunga wechiGerman "Ken Follet" Pakati pemazita ake anozivikanwa ari Chiedza chenyika o Munyu wepasi.
Munyaya iyi tinosangana nehama Balian uye Blanche Fleury, vazukuru vemhuri yevatengesi vanobva kuVarennes Saint-Jacques. Pakutambura a zvinosuwisa zvemhuri uye hupfumi, tanga a kufambisa kwekutengesa kuchitsuwa chiri kure cheGotland. Ivo vanoda kuchengeta bhizinesi remadzitateguru avo chero zvodii. Nekudaro, hujaya hwavo hunotungamirawo kwavari tsvaga ruzivo uye rudo. Pamberi pavo vachasangana nevane simba chibharo, mhuri yevatengesi vasina hunhu vanozoita zvese zvavanogona kuti vachengetedze simba ravo muBaltic.
Kutiza - David Baldacci
Uye ini ndinopedzisa neNorth American Baldacci, yavo mangwana acho 6 September bhuku rake idzva rinobuda. Ndiye tercero kubva pane yekuita uye yekufungidzira akateedzana ane mumiririri John puller, aimbova wemauto emauto akakosha uye iye zvino muongorori. Ndakaiverenga kare kare uye yakandivaraidza zvakanyanya, zvakafanana nezvakapfuura zviviri, Zuva zero y Vakakanganwa.
Mune izvi isu tine Robert, mukoma waJohn, uyo akabatwa nemhosva kumukira kukuru uye mhosva kupokana nekuchengetedzwa kwenyika. Yakavharirwa mutirongo yemauto yakakosha uye yakachengeteka, yake kupukunyuka kunoshamisa zvinomuita tsotsi rinodiwa kwazvo munyika. Kubva kuhurumende vazhinji vanofunga izvozvo chakanyanya kumubata ari mupenyu munin'ina wake John.
Anosarudza kubvuma Basa chii icho akaomesesa pabasa rake. Asi achakurumidza kuona kuti vanhu vamwe chete avo vakatongera hama yake vanoda kuti afe. Uye kwete iye chete. Panosangana hama mbiri ivo vachafanirwa kuona zvekuita kutarisana nekusunungura avo vanovashusha.
Zvinyorwa: Planet yemabhuku - Fnac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Gunyana. 6 zvinyorwa zvitsva zvemhando dzakasiyana
"Alice nepagirazi." Chikamu chechipiri chisingazivikanwe chaLewis Carroll's classic.